Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Firxadka Kooxda TPLF oo Batay & Abay Sahay oo Ciyaalkiisii Lacararay.
Deg Deg: Firxadka Kooxda TPLF oo Batay & Abay Sahay oo Ciyaalkiisii Lacararay.
War hada kusoo dhacay qaybta warqabadka ee Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa xaqiijinaya in ninka awooda badan ku dhex lahaan jiray kooxda TPLF ee Abay Sahay uu si dhuumashaal ah ciyaalkiisii kugeeyay wadanka Maraykanka, isagoo kabaqanaya in dadkiisa iyo duunyadiisaba lagu xanibo wadanka gumaysiga Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno Abay Sahay oo mar kamid ahaa shakhsiyaadka ugu awooda badan ee kooxda TPLF isla markaana aad looga ixtiraamo wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa shalay 12 ciyaal ah oo uu dhalay kadajiyay wadanka Maraykanka.
Abay Sahay oo ciyaalkiisa si dhuumashaal ah wadanka kaga saaray ayaa lasheegayaa in indhawaalaba lagu hayay dabagal aad uwayn isagoo lagu xaqiijiyay in uu lunsaday hanti aqli kafooq ah oo hantidii shacabka ahayd. Warka ayaa intaas kudaraya in Abay Sahay loohaysto 800 oo Milyan oo Doller oo uu lunsaday xiligii uu ahaa maareeyaha warshadaha Sonkorta ee wadanka Itoobiya.
Abay Sahay oo kamid ahaa aas’aasayaashii Jabhada TPLF ayaa xilal aad ubadan kasoo qabtay wadanka Gumaysiga Itoobiya, wuxuuna Abay Sahay soomaray gudoomiyaha Urur kusheega TPLF, sidoo kale shakhsigan oo ahaa qof awood dheeraad ah lasiiyay ayaa larumaysan yahay in uu gaystay dambiyo dagaal oo aad ubadan.
Awoodii faraha badnayd ee Abay Sahay ayaa lasheegayaa in ay aad hoos ugu dhacday kadib markuu bakhtiyay saaxiibkiisii waynaa ee Malis Zanawi, waxaana lasheegayaa in lagu bilaabay dabagal iyo handadaad dhinaca awooda ah oo xoog bada. Abay Sahay oo mudo baadhitaan lagu hayay ayaa la ogaaday in uu lunsaday hanti dadwayne oo kabadan 800 oo milyan oo Dooller.
Dhinaca kale waxaa xabsiga ladhigay haweenayda udhaxda Abay Sahay iyo waliba maareeye kuxigeen kiisii xiligii uu ahaa maareeyaha Warshadaha Sonkorta, waxaana lasheegayaa in isaga lagu dhici waayay.
Sidoo kale waxaa la ogaaday 7 dhismo oo aad udhaadheer oo gabadha uu dhalay Abay Sahay ay kuleedahay Magaalada Addis Ababa, sidoo kale wuxuu Abay Sahay Saro dhaadheer kuleeyahay wadamada Imaaraadka iyo Maraykanka.
Kooxda hantida shacabka boobta ee wayaanaha ayaa lasheegayaa in mid kasta uu raadsanayo meel uu kunoolaado ehelkiisana uugaysto, waxayna kooxdu ka baxsanaysaa in sharciga la hor geeyo.